DHAGEYSI XASAASI AH: Khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhexgalay Saraakiisha ciidamada SL & PTIMES oo xog ka heshay – Puntlandtimes
DHAGEYSI XASAASI AH: Khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhexgalay Saraakiisha ciidamada SL & PTIMES oo xog ka heshay
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in uu jirro khilaaf iyo kala shakigii ugu xooga badnaa oo dhexmara horjoogayaasha ciidamada maamulka Somaliland eekusugan gobalka Sool, gaar ahaana Jiida Tukaraq, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey in ay taasi sababtay in ay saacadihii u dambeeyy furimaha ka baxaan taliyaasha qaarkood.
Beentan aad cadaysateen maad iska joojisaan oo is dejisaan. Muuse hadhigbuu ku hayaa ciidamadiisa waayo marabo in uu Puntland weeraro.oo Puntland ay qalalaase iyo amni daro gasho. Puntland oo amni ah Somaliland danbaa ugu jirta mar hadii Dawlad dhexe oo degaan kaa amnigiisa sugi kartaa aanay jirin. Laakiin ciidanku difiica un kuma jirakaro hadii weerarku joogsan waayo. Xuduudaa international-ka ah un bay Somaliland daba socotaa iyo sidii Sool amni buuxa uga fuli lahaa si ururada samafalka iyo Somaliland-ba horumarka u gaadhsiin lahaayeen oo dadka wax loogu qaban lahaa. Markaa amini daradiinu khasaare un bay nootahay ee maaha nabad raadintu in ay awood daro tahay. Markaa wax dejiya oo buuqa daaya saaxiibayaal.
Ku Ali; sxb dadku Habeenkii ayey Riyoodaan adiguse Duhurkii ayaad Riyo gashay. Waxa aad Sool u qabanayso kaalay Hargeysa Sicir-barar ka uga saar. Maanta reer Hargeysa ayaa dhaqaalo u baahan.
Waa runtaa Hargeysa iyo meel walba oo Somaliland kamid ahi way ubaahantahay dhaqaale laakiin adigu waxaad u fekeraysaa village ahaan iyo hadii meel wax loo qabto meel kalay ka go’an tahay. Dawladda Hargeysa iyo Tukaraq waa isugu mid. Muwaadin-ka Tukaraq deganina ta ka Hargeysa xaquuqdu leeyahay buu leeyahay balseh way ka sii mudanyihiin waayo waxbadan oo Hargeysi haysato baanay haysan markaa wadanka waa la isa soo gaadhsiinayaa. Waxa yar ee lahaysto si xaq ah baa loo qaybsanayaa. Laakiin idinku buuqa inaga daaya oo barwaaqaad ku jirtaane ha iska kal tuurina waayo hadii Somaliland dagaalka si arxandaro ah u gasho meesha aan dhaqaaleheeda ama amaankeedu aanu soo kala hadhay waa Puntland